Otu esi akpọsa na Pinterest | Martech Zone
Fraịdee, June 6, 2014 Satọde, Febụwarị 4, 2017 Douglas Karr
Okwesighi iju anya na mgbasa ozi a na-ahụ anya na-akwalite ọnụego ntụgharị kachasị mma na mgbasa ozi n'ịntanetị… na Pinterest abụghị otu. Na a ọmụmụ site na Shopify nyochaa nde nleta 37, achọpụtara na Pinterest dugara ọnụego mgbanwe e-commerce nke US.
Ka ndị ahịa na-atụgharị ma na-agbapụ site na narị otu narị nde, ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-agbasi mbọ ike ime ka ikike ha nwere Pinterest nwere. Lelee ntuziaka mgbasa ozi Pinterest a mara mma ma bido ịkwado ụzọ gị ịga nke ọma.
Social media Amawaputala na-atumatu olu maka 18% nke Jeriko 'ngụkọta mgbasa ozi Amawaputala n'ime ọzọ afọ ise… na-eme Pinterest anya dị ka a mara ezigbo mma ego! Ibido, ọ bụrụ na inweela akaụntụ Pinterest nke gị, ị ga-achọ gbanwee nke ahụ na akaụntụ azụmahịa. N'oge ahụ, akaụntụ gị ga-enweta ohere na ngwaọrụ ndị ọzọ ma ị nwere ike ịdebanye aha maka mkpọ na-akwalite. Obi ụtọ na mgbasa ozi!
Tags: kpọsaanụ na pinterestotúesi akpọsa na pinterestPinterestmgbasa ozi pinterest